SlayerAI: तपाईलाई जित्न आवश्यक धेरै फरक शब्दहरू निर्धारण गर्दै | Martech Zone
मङ्गलबार, जनवरी 18, 2022 मङ्गलबार, जनवरी 18, 2022 Douglas Karr
औसतमा, पाँच जति पटक धेरै मानिसहरूले हेडलाइन पढ्छन् शरीर प्रतिलिपि पढ्नुहोस्। जब तपाईंले आफ्नो हेडलाइन लेख्नुभएको छ, तपाईंले आफ्नो डलरबाट अस्सी सेन्ट खर्च गर्नुभएको छ।
डेभिड ओगिल्भी, विज्ञापनमा Ogilvy
स्लेयर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो (AI) शीर्षक दिइएको दर्शकहरूलाई कत्तिको आकर्षक छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने उत्पादन। उदाहरणका लागि, यो डेनिम बुझ्छ डेजी dukes हो १५% बढी आकर्षक डेनिम भन्दा छोटो शॉर्ट्स फेसन बजारमा। स्लेयरले प्रतिलिपि कहाँ देखा पर्नेछ भन्ने आधारमा पाठ प्रशोधन गर्दछ, तपाइँलाई तपाइँको दर्शकहरूको लागि अधिकतम सफलताको लागि अनुकूल परिणामहरू प्रदान गर्दछ। AI ले तिनीहरूको प्रभावकारिताको साथसाथै हजारौं अघिल्ला अभियानहरू र पाठहरूको विश्लेषण गरेर काम गर्दछ। त्यसपछि पाठ आकर्षक छ वा छैन भनेर पहिचान गर्न तालिम दिइन्छ।
स्लेयर कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण थियो बढ्दै ग्राहक ३०% सार्वजनिक रूपमा व्यापार गरिएको साइबर सुरक्षा कम्पनीको लागि, OneSpan। OneSpan ले सबैभन्दा आकर्षक क्रमपरिवर्तन पहिचान गरेर इमेल विषय रेखाहरूलाई अनुकूलन गर्न Slayer को उपयोग गर्‍यो:
SlayerAI किन महत्त्वपूर्ण छ?
विगत ३ वर्षमा प्रतिलिपी उत्पादन हुने गरेको छ 10 गुणा बढ्यो.
ग्लोबल डिजिटल सामग्री सिर्जना बजार आकार 38.2 र 2030 को अवधिमा 12% को CAGR मा 2020 सम्म US$ 2030 बिलियन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भर्चुअल वास्तविकता र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको आगमनको कारण, डिजिटल सामग्री निर्माण उपकरणहरूको मागमा अचानक बृद्धि भइरहेको छ। पूर्वानुमान अवधि को समयमा।
InsightSLICE, डिजिटल सामग्री निर्माण बजार
यो वृद्धि धेरै कारकहरू द्वारा संचालित भएको छ - अनलाइन वाणिज्यमा बढ्दो पारी, पहिलो पटक अनलाइन आउने नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको विस्तार, र AI सँग प्रतिलिपि सिर्जना गर्ने क्षमता।
त्यहाँ सामग्री सिर्जना गर्न पहिले भन्दा धेरै प्रतिभा र उपकरणहरू छन्, र अनलाइन वाणिज्यमा परिवर्तनले प्रतिलिपिको मागलाई बढाइरहेको छ... र यो केवल ठूलो हुँदै गइरहेको छ।
SlayerAI ले तपाईंलाई सस्तोमा उत्पन्न सामग्रीको समुद्रमा आफ्ना दर्शकहरूसँग प्रतिध्वनि गर्ने क्षमता दिन्छ। यो संग, महान संचार एक महाशक्ति बन्छ। तपाइँको प्रतिलिपिको साथ बाहिर खडा हुन, तपाइँसँग उचित व्याकरण र हिज्जे छ भनेर सुनिश्चित गर्नु भन्दा बढी लिन्छ, वा केवल उत्तम मार्केटिंग अभ्यासहरू पछ्याउँदै, किनकि अन्त्य खेल भनेको तपाइँको दर्शकहरूलाई उनीहरूको स्थानमा भेट्न सक्षम हुनु हो।
हाल, खराब सञ्चारको समस्या म्यानुअल हस्तक्षेप (जस्तै, मानव सम्पादक) र केहि सफ्टवेयर उपकरणहरूको प्रयोगबाट हल भइरहेको छ जसले तपाईंलाई जेनेरिक कन्भेन्सनहरू प्रदान गर्दछ (व्याकरण रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय भएको)। जबकि मानव सम्पादकहरू महान र आला-विशिष्ट हुन सक्छन्, एक विशेष प्रतिलिपि लेखक फेला पार्न महँगो हुन सक्छ र त्यहाँ तिनीहरूले गर्न सक्ने काम मात्र छ।
SlayerAI आदर्श सहायक हो, विशेष गरी जब लक्ष्य भनेको तपाइँको मार्केटिङ अभियानहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्ने हो, लगातार।
SlayerAI को लागि उत्तम छ?
SlayerAI अनलाइन प्रतिलिपि लेख्ने जो कोहीको लागि एक उत्कृष्ट उपकरण हो। हाल, स्लेयर प्रयोगकर्ताहरूले ठूला उद्यमहरू, साना व्यवसायहरू, मार्केटिङ एजेन्सीहरू, र व्यक्तिगत स्वतन्त्र प्रतिलिपि लेखकहरू समावेश गर्दछ।
AI सीमित समयको लागि प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ, र यसले तुरुन्तै सामग्री सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ, साथै:
महिनाको सट्टा मिनेटमा A/B परीक्षणको हप्ताहरू गर्दै
व्याकरणको सट्टा प्रभावको लागि हिज्जे जाँच गर्नुहोस्
जुनियर प्रतिलिपि लेखकहरूको लागि तत्काल गुणस्तर नियन्त्रण
राम्रो प्रतिलिपि लेख्ने कुञ्जी भनेको तपाइँका दर्शकहरूले पहिले के चाहन्छन् भनेर निर्धारण गर्नु हो, र त्यसपछि तपाइँको ब्रान्ड समावेश गर्दै। यसैले स्लेयरले दर्जनौं लक्षित दर्शकहरूबाट चयन गर्ने क्षमता सिर्जना गर्यो; क्रिप्टोमा रुचि राख्ने मानिसहरूबाट, फेसन, सौन्दर्य, फिटनेस, कारहरू, घर नवीकरण र थपमा रुचि राख्नेहरूलाई।
हाम्रो एआई बिटा प्रयोगकर्ताहरूको सानो समूहसँग व्यापक रूपमा परीक्षण गरिएको छ, र परिणामहरू असाधारण छन्। चाहे यो एक स्टार्ट-अप मद्दत थियो खुल्ला दर १२% बाट १९% सम्म बढाउने, वा मार्केटिङ एजेन्सीहरूलाई तिनीहरूको काम जाँच गर्न कम समय खर्च गर्न अनुमति दिएर बढ्न मद्दत गर्दै।
राम्रो वेबसाइट हेडलाइनहरू, विषय लाइनहरू, ब्लग शीर्षकहरू, विज्ञापन प्रतिलिपि, सामाजिक पोष्टहरू र SMS लेख्न चाहनुहुन्छ? स्लेयरले तपाईंलाई सबै मोर्चाहरूमा कभर गरेको छ।
SlayerAI कसरी काम गर्छ?
स्लेयर प्रयोग गर्नु सरल छ, केवल नि: शुल्क खाताको लागि साइन अप गर्नुहोस्, लगइन गर्नुहोस्, र त्यसपछि:
आफ्नो लक्षित दर्शक चयन गर्नुहोस्
तपाईले स्कोर गर्न चाहनुभएको प्रतिलिपि इनपुट गर्नुहोस्, र तपाईलाई सुझावहरू मनपर्छ कि छैन चयन गर्नुहोस्
प्रक्रिया क्लिक गर्नुहोस्
यति हो! यदि तपाईंले आफ्नो आदर्श लक्षित दर्शकहरू देख्नुभएन भने, तपाईंले वेबसाइटको बाँया-हातको ड्रपडाउन प्रयोग गरेर हामीबाट नयाँ अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले देख्नु भएको स्कोर तपाईको पाठ अत्यधिक आकर्षक भएको प्रतिशत मौका हो। AI 80%+ सटीक छ, जसको मतलब तपाईंको हेडलाइनहरूले अब तपाईंका बहुमूल्य पाठकहरूको आँखा धेरै पटक समात्नेछ।
तपाई भाइरल हुँदा के हुन्छ?
तपाईंको उत्पादन वा सेवालाई भाइरल हुने उत्तम मौका दिनुले तपाईंको कम्पनीको भाग्यलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ। यो रेकर्ड बिक्री वर्ष र यथास्थिति कायम राख्न बीचको भिन्नता हो।
तपाइँको वृद्धि र भाइरल हुने सबैभन्दा राम्रो मौका SlayerAI को प्रयोग गरी तपाइँ तपाइँको मार्केटिङ प्रयासहरु लाई सुनिश्चित गर्न को लागी। अहिले नै साइन अप गर्नुहोस् र SlayerAI को २ हप्ता पूर्ण रूपमा नि:शुल्क प्राप्त गर्नुहोस्!
SlayerAI परीक्षणको लागि साइन अप गर्नुहोस्
प्रकटीकरण: म Amazon र को लागि मेरो सम्बद्ध लिङ्कहरू प्रयोग गर्दैछु SlayerAI यस लेखमा।
टैग: विज्ञापन प्रतिलिपिaiदर-क्लिक दरसामग्री मार्केटिङसामग्री अनुकूलनctrईमेल खुला दरहरूइमेल विषय रेखा अनुकूलनहेडलाइन अनुकूलनशीर्षकहरूविज्ञापन ctr बढाउनुहोस्क्लिक-थ्रु दर बढाउनुहोस्इमेल खुला दरहरू बढाउनुहोस्खुला दरहरू बढाउनुहोस्हेडलाइनहरू अनुकूलन गर्दैस्लेयरविषय रेखा अनुकूलन